Tanderra Cottage Horsham - I-Airbnb
I-Horsham's Tanderra Cottage ibamba umtsalane kunye nomlingiswa weentsuku ezidlulileyo, ngaphandle kokuphoswa bubomi bakho banamhlanje. I-WiFi yasimahla kunye neNetflix.
Ukufudumeza nokupholisa okudityanisiweyo, umlilo wentsimbi yegesi, amagumbi okulala ama-4, amagumbi okuhlambela ayi-2, izindlu zangasese ezi-2, ibhafu, ishawari eyahlukileyo, indawo yokuhlamba impahla enomatshini wokuvasa kunye nesomisi. Ikhitshi lelizwe lixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokutyela elahlukileyo kunye neLounge. Hamba ngaphandle ngeengcango zaseFransi ungene kwindawo enkulu yokuzonwabisa ene-BBQ. Indawo enkulu engasemva ibiyelwe ngokupheleleyo kwaye ikhuselekile. Izilwanyana Zasekhaya Wamkelekile.
I-Tanderra Cottage likhaya elineminyaka eli-100 ubudala. Yiva umtsalane weentsuku ezidlulileyo, kodwa usenobomi bakho bemihla ngemihla. Eli khaya linamagumbi okulala ama-4, kwaye lingalala abantu abasi-7. Zonke ilinen kunye neetawuli zibonelelwe. Iibhedi zenziwe zilungele ukufika kwakho. Ikhaya liqhayisa ngokufudumeza okubanjwa kunye nokupholisa kunye naManzi ashushu ngoko nangoko.
Siyipropathi enobuhlobo kwizilwanyana zasekhaya, ke ikhaya liqhayisa ngeyadi enkulu ekhuselekileyo ebiyelwe ngokupheleleyo ngasemva. Inja/izinja zakho ziyakonwabela ukuphonononga iyadi yangasemva. Indawo engasemva yeyolonwabo lwakho, inendawo ezolileyo & enoxolo yeMithi kunye neentaka ezininzi zemveli eziza kutyelela. Ngasemva kweyadi kukho indawo enkulu yokuzonwabisa egqunyiweyo ene-BBQ.
Qaphela: Iibhedi zesingle kwi-3rd & 4th Bedrooms ziseKing Single Size.
50" HDTV ene-I-Netflix, izitishi zeTV eziqhelekileyo
4.93 · Izimvo eziyi-133
Le propati ifumaneka kuphela kwi-1km ukusuka kwi-Horsham CBD kwaye kulula ukuhamba umgama kuzo zonke iiPaki, iCafe, iiVenkile kunye neeHotele.
Nceda uzive ukhululekile ukufowunela uDanielle ngaphambi okanye ngexesha lokuhlala kwakho ukuze ufumane uncedo njengoko kufuneka.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$3572
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Horsham